MB 2018 Diseembar, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Warqadani waa xarafkeyga billaha ah ee ugu dambeysay anigoo ah shaqaalaha GCI maxaa yeelay waxaan howlgab noqonayaa bishaan. Markii aan ka fekero waqtigeyga Madaxweynenimada beesheena iimaanka, barakooyinka badan ayaa maskaxda ku soo dhaca oo Ilaahay ina siiyay. Mid ka mid ah barakooyinkaani waxay la xiriiraan magacayaga - "Grace Wadaagga Caalamiga ah". Waxaan u maleynayaa inay si quruxsan u qeexeyso isbeddeladeena aasaasiga ah ee bulsho ahaan. Nimco (Nimco) Ilaahow waxaan nahay bulsho caalami ah, nimco ku saleysan aaminaad (Wadaag) oo kaqeyb gala bulshada aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Waligey shaki kama qabin in seddex-geesiyo Ilaaheen ina keenay barakooyin badan gudaha iyo isbedelkan cajiibka ah. Xubnaha qaaliga ah, asxaabta iyo shaqaalaha GCI / WKG, waad ku mahadsan tihiin daacadnimadaada safarkan. Noloshaadu waxay cadeyn u tahay isbedelkeena.
Duco kale oo maskaxda ku soo dhaca waa midda in badan oo ka mid ah xubnaheena muddada dheer soo sheegi kara. Sanado badan waxaan badanaa ku tukan jirnay howlaheenna in Ilaah laga yaabo inuu runta noo muujiyo. Ilaah wuu maqlay baryadaan - qaab yaab leh! Wuxuu furay qalbiyadeena iyo maskaxdeena si aan u fahamno qoto dheer ee jacaylka uu u qabo aadanaha oo dhan. Wuxuu ina tusay inuu had iyo goor nala jiro iyo in mustaqbalkiisa daa'imka ah uu amaan kujiro nimcadiisa.
Qaar badan ayaa ii sheegay inaysan sanado ka maqnayn wacdiyada ku saabsan nimcada kaniisadahayaga. Waxaan Ilaahay ugu mahad naqayaa bilowga 1995 si looga gudbo tabar darrida. Nasiib darrose, xubnaha qaarkood waxay si xun u falceliyeen adkeynkeenna cusub ee nimcadda Eebbe waxayna waydiiyeen su'aasha: "Muxuu yahay alaabtii Ciise oo dhan? Jawaabteena dib ayaa markaa (sida ay maanta tahay) waa: "Waxaannu ku wacdinnaa injiilka ku saabsan kii na abuuray, kan noo yimid, kan noo dhintay oo noo sara kiciyey, iyo kan na badbaadiyey!"
Sida ku xusan Kitaabka Quduuska ah, Ciise Masiix, Rabbigeenna soo sara kacay, wuxuu hadda jannada ku jiraa wadaadnimadeena sare, isagoo sugaya soo laabashadiisa ammaanta. Sidii loo ballanqaaday, wuxuu diyaariyaa goob anaga. «Ha qalbi jabin qalbigaaga! Ilaah rumayso oo i rumaysta! Waxaa jira guryo badan oo ku yaal guriga aabbahay. Haddaanay ahayn, waxaan kugu odhan lahaa, Waxaan kuu diyaargaroobay meesha? Oo markaan u tago diyaargarowgaaga, waxaan rabaa inaan soo noqdo oo aan kaa qaato oo aad meeshaad joogtid weliba joogtid. Meel kasta oo aan tago, waad ogtahay dariiqa » (Yooxanaa 14,1-4). Meeshani waa hadiyadda nolosha weligeed ah ee leh Ilaah, waa hadiyad suurtagelisay wax walba oo Ciise sameeyey iyo wuxuu samayn doono. Dabeecadda hadiyadda ayaa Bawlos u muujiyey Ruuxa Quduuska ah: «Waxaan ka hadlaynaa xigmaddii Ilaah oo qarsoon, oo qarsoodiga ah, oo Ilaah hore uga sii doortay ammaanteenna oo ayan ninna aqoonsan kan dunida ka taliya. maxaa yeelay, hadday garteen, iskutallaabta kuma ay qodbeen Rabbiga ammaanta. Halkii ayaan uga hadlaynaa sidii loo qoray (Ishacyaah 64,3): "Wixii aan iluna arag, dhegna ma maqal, oo ninna qalbigiisu qalbigiisa kuma haysto wixii Ilaah u diyaariyey kuwa isaga jecel." Laakiin Ilaah wuxuu inoogu muujiyey Ruuxa; maxaa yeelay, Ruuxu wax walba wuu baadhaa, oo ay ka mid yihiin moolka Ilaah. (1 Korintos 2,7: 10). Waxaan Ilaah ugu mahad naqayaa inuu noo muujiyey sirta badbaadadayada ee Ciise - badbaadada badbaadada dhalashada, nolosha, dhimashada, sarakicinta, u dabbaaldega iyo dib u soo noqoshada Rabbigeenna. Waxaas oo dhan waxaa lagu sameeyaa nimco - nimcadii Ilaah ee uu inagu siiyay xagga Ciise iyo xagga Ruuxa Quduuska ah.
In kasta oo shaqadeyda GCI ay dhowaan dhammaan doonto, waan kusii xirnaan doonaa bulshadeena. Waxaan sii wadi doonaa inaan ku adeego guddiyada GCI ee Mareykanka iyo Boqortooyada iyo golaha Seminar-ka nimcada 'Grace Communion Seminar' (GCS) ka shaqee oo wacdiyo ka bixiyaa kaniisadda gurigeyga. Wadaad Bermie Dizon wuxuu i weydiiyay haddii aan bixin karo khudbad bil kasta. Waan kula kaftamay in hawlahan oo dhan aysan u muuqan sidii hawlgab. Sida aan ognahay, wasaaradeena ma ahan shaqo caadi ah - waa wicitaan, hab nololeed. In alla inta Eebbe i siiyo xoog, uma joojin doono u adeegista dadka kale magaca Eebahay.
Waxaan dib u milicsanayaa labaatankii sano ee la soo dhaafay, waxaan hayaa xusuus aad u wanaagsan oo GCI ah iyo sidoo kale barakooyin badan oo la xiriira qoyskeyga. Aniga iyo Tammy waan ku faraxsanahay inaan aragno labadeenna carruurta ah oo koray, oo ka qalin-jebiyey kulliyadda, helitaanka shaqooyin wanaagsan oo aan ku faraxsan nahay U dabaaldega munaasabadahaas waa kuwo aad u badan oo aan fileynay inaan gaarno. Sida inbadan oo idinka mid ahi ogyihiin, bulshadeenu waxay hore wax u baray inaysan waqti u hayn doonin waxyaalahaas oo kale - Ciise wuu soo laaban doonaa goor dhow waxaana nala geyn doonaa "meel amni" Bariga Dhexe kahor imaatinkiisa labaad. Nasiib wanaagse, Ilaah wuxuu lahaa qorshayaal kale, in kasta oo ay jirto meel amni ah oo loo diyaariyey annaga dhammaanteen - waa Boqortooyadiisa Weligeed ah.
Markii aan bilaabay inaan u shaqeeyo madaxtinimada diinteenna 1995, waxaan diiradda saaray inaan dadka ka dhigo inay ogaadaan in Ciise Masiix leeyahay wax walba mudnaanta koowaad: “Isagu waa madaxa jirka, kaniisadda. Isagu waa bilowgii, iyo curadka kuwii dhintay, inuu isagu isagu yahay kan ugu horreeya wax walba » (Kolosay 1,18). In kasta oo aan ka fadhiisanayo wax ka badan 23 sano markii aan ahaa Madaxweynaha GCI, diiradda aan weli leeyahay waan sii socon doonaa. Nimcada Ilaah ayaan joojin doonaa u tilmaamida dadka Ciise! Wuu nool yahay, maxaa yeelay isagu waa nool yahay, annaguna waannu nool nahay.
Waxaa xambaarsan jacayl,